Female infertility (အမျိုးသမီးများနှင့်မြုံခြင်း ပြဿနာ)
မြုံခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်မှာ အမျိုးသားနှင့်အမျိူးသမီးနှစ်ဦးအတူတူနေသည့်ကြားမှ တစ်နှစ်အထိသားသမီးရတနာမထွန်းကားခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်။လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ စုံတွဲများ၏ ၁၀-၁၈%သည်မျိုးဆက်မပြန့်ပွားနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။အမျိုးသမီးများ၏မျိုးဆက်မပွားနိုင်ခြင်းအကြောင်းရင်းများပေါ်မူတည်၍ကုသခြင်းမှာလဲကွဲပြားခြားနားတတ်ကြပါသည်။သို့သော် ၉၅ရာခိုင်နှုန်းသော စုံတွဲတို့သည် မည်သည့်ကုသမှုမှမခံယူဘဲ ၂ နှစ်အထိကြိ...
သုက်လွှတ်စောခြင်း (သုက်လွှတ်မြန်ခြင်း) ဆိုတာက သုက်လွှတ်ခြင်းကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းမရှိဘဲ အချိန်တိုအတွင်း သုက်လွှတ်ခြင်းပေါ့ဗျာ။ ဘယ်လောက်အချိန်မှာပဲ သုက်ထွက်သွားတာ အင်္ဂါထဲရောက်ရုံနှင့် -သုက်ထွက်တာ၊ စက္ကန့်ပိုင်းလောက်အတွင်း သုက်ထွက်တာ၊ ပွေ့ဖက်နမ်းရုံနဲ့ပဲ သုက်ထွက်တာမျိုးထိ ရှိတတ်တယ်။ သုတေသနပညာရှင်များက အမျိုးသားတော်တော်များများမှာ ဒီပြဿနာရှိနေတတ်ကြတယ် လို့ဆိုတယ်။ အရေအတွက်...
on: 18 May, 2017
လိင်ဆန္ဒလျော့နည်းခြင်းဟာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဖြစ်တတ်ကြတာ မှန်ပေမယ့် အမျိးသမီးတွေမှာ ပိုပြီးဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာများထဲမှာ စိတ်ဆန္ဒလျော့နည်းတာ အများဆုံးဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အမျိုးသားဟော်မုန်းတက်စတိုစတီရုန်း Testosterone ဆိုတာက အမျိုးသားတွေမှာသာ ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ အမျိုးသမီးတွေမှာလည်း မူလသဘာဝကတည်းက ရှိပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပမာဏအလွန်နည်းတယ်။ မမျိုးဥအိမ်က ထွက...
အမျိုးသမီးများတွင် ဖြစ်ပွားတတ်သော သားဥအိမ်ကင်ဆာ (၃)
အခြားရောဂါများစစ်ဆေးမှုမှတွေ့ရှိနိုင်သားဥအိမ်ကင်ဆာနဲ့ တခြားရောဂါတွေနဲ့ ခွဲခြားရခက်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ အူမကြီးရောင်တာဖြစ်ဖြစ်၊ အူအတက်ရောင်တာဖြစ်ဖြစ်၊ အစာအိမ်ရောဂါဖြစ်ဖြစ် အာထရာဆောင်းရိုက်ကြည့်ရင်းနှင့် သားဥအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ်တာ တွေ့ရတဲ့လူနာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ရောဂါရဲ့အဆင့်က Stage 1 ပဲဆိုရင်တော့ ဆရာတို့က သက်တမ်းရှည်ရှည်နေနိုင်ဖို့ ကုသပေးပြီး ဆောင်မြင်သူလည်းရှိပါတယ်။
အမျိုးသမီးများတွင် ဖြစ်ပွားတတ်သော သားဥအိမ်ကင်ဆာ (၁)
သားဥအိမ်က အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မှာ နှစ်ခုရှိပါတယ်။ သားဥအိမ်တစ်ခုစီက သားဥပြွန်တစ်ခုစီဆိုတော့ ဘယ်နဲ့ညာနှင့်ဆို နှစ်ခုရှိပါတယ်။ သားဥပြွန်ရဲ့ သားဥအိမ်ကနေ Oocyte လို့ခေါ်တဲ့ မမျိုးဥ ထုတ်ပေးပါတယ်။ အများစုအမှတ်မှားတာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ တစ်လတစ်ခါ ဓမ္မတာလာ ပါတယ်။ ဓမ္မတာလာတာက ပုံမှန်ဆိုရင် ၂၈ ရက်မှာ တစ်ခါပါ။ သားဥကြွေတာကတော့ ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင် ဓမ္မတာလာတဲ့ လရဲ့ တစ်ဝက်ဆယ့်လေးရက်၊ ဆယ့...
on: 20 Apr, 2017
သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု၊ အမျိုးသမီးများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဓ္ဓမကျင့်မှု၊ ထိကပါးရိကပါးပြုမှု၊ လူကုန်ကူးမှု စတာတွေဟာ ပတ််ဝန်းကျင်တွင်ကြားနေရသော ပြဿနာများဖြစ်ပါတယ်။ ---- အားနည်းသူ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်များ၏ လုံခြုံမှုကဘယ်မှာလဲ? ---- အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ သူတို ့တွေမှာရော ဘယ်လောက်တောင်မှ စိတ်ကျန်းမာရေးရော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးပါ ထိခိုက်သွားနိုင်ပါသလဲ? ---- အဲဒီ...
on: 13 Apr, 2017
ဆန္ဒလျော့နည်းမှုဟာ ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ပြဿနာဝေဒနာတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ကင်ဆာရောဂါကြောင့် ဓာတ်ရောင်ခြည်နဲ့ကုထားဖူးတယ်။သားအိမ် ဒါမှမဟုတ် မမျိုးဥအိမ်ရောဂါကြောင့် ခွဲစိတ်ဖူးတယ်ဆိုရင် ဆန္ဒလျော့နည်းသွားတတ်တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။မီးယပ်သွေးပေါ်ခါနီးချိန်၊သားသမီးမွေ...
အိပ်မက်ထဲမှာ လိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်တတ်တာ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲလား
on: 06 Apr, 2017
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိချင်ကြမယ်ထင်ပါတယ် ။ တစ်တယ်တော့ ဒီလိုဖြစ်တာကိုယ်တစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ပါဘူး ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အခြေအနေမို့ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ လိင်ဆက်ဆံတယ်လို့မက်တဲ့အခါ အိပ်ရာကနိုးတဲ့အချိန်မှာ အမှန်တကယ်ဆန္ဒပြီးမြောက်တာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်ဆိုပါစို့ လိင်ဆက်ဆံရတယ်လို့မက်ပြီးအချိန် အပြင်မှာ တကယ်သုတ်ရည်ထွက်နေတာမျိုးတွေဟာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပါတယ...
on: 30 Mar, 2017
ဆရာ့ကို ထူးထူးဆန်းဆန်းမေးရဦးမည်။ အမျိုးသမီးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝေဒနာတစ်ခုပါ။ ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာ ဖတ်လိုက်မိတော့ အရမ်းအ့ံသြသွားမိတယ်။ အဲဒီလိုဝေဒနာမျိုးရှိမယ်လို့ ကျွန်တော်မထင်မိခဲ့ဘူးဆရာ။ ခင်ဗျားက ပဟေဋ္ဌိလုပ်နေပြန်ပြီ။ ဘာဝေဒနာလည်းဆိုတာ မပြောသေးဘူး။ ထူးဆန်းတာတွေရော၊ အ့ံသြတာတွေရော၊ ဆိုပါဦး ဘာဝေဒနာလဲဗျာ။Persistent Sexual Arousal Syndrome “PSAS” ဆိုတဲ့ ဝေဒနာမျိုး တကယ်ရှိပါသလား။
on: 23 Mar, 2017
အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးများ ရာသီမလာလျှင် ကိုယ်ဝန်ကို အရင်ဆုံးစဉ်းစားမိမှာပါ။ တားဆေး၊ ဟော်မုန်းဆေးများသုံးစွဲနေလျှင်လည်း ထိုဆေးများ၏ အာနိသင်ကြောင့် ရာသီပုံမမှန်တာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နို့တိုက်မိခင်များမှာလည်း ရာသီမလာတာမျိုးရှိပါတယ်။ သို့သော် အမျိုးသားနှင့်တခါမှ အတူမနေဖူးသူ အပျိုကလေးများမှာလည်း ရာသီမလာတာမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ ထိုအခါ ဘယ်အကြောင်းအရာများကို စဉ်းစားမလဲ။